Toetran'ny daty | Nutri Diet
Daty niseho avy felatanana daty ary afaka mahita azy ireo isika enina arivo taona mahery lasa izay. Nanomboka tany Azia atsimo atsinanana sy Afrika Avaratra ny fambolena azy, ary niely tany amin'ny firenena mafana kokoa.
Ny voan'ny palma dia misy fananana maro izay tsy fantatry ny maroNoho izany dia tonga eto izahay hilaza aminao hoe inona ny tombony azo avy aminy ary inona no azon'izy ireo atao ho anao.
El daty toy ny voankazo dia boribory boriboryMiloko volontany izy, hentitra sy mamy ny henany ary ao anatiny dia mahita taolana lava isika. Afaka mahita santionany hatramin'ny 4 santimetatra ny halavany. Araka ny efa nolazainay, ny fambolena azy dia miompana amin'ny faritry ny Moyen Orient, Afrika Avaratra ary ny faritra sasany any Kalifornia. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia hitantsika izy ireo amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao.
Matetika izy ireo dia tafiditra ao anatin'ny vondrona voanjo, mitovy amin'ny raisins na apricots maina no itondrana azy ireo, na izany aza, ny daty dia maniry sy masaka amin'ilay zavamaniry mihitsy.
Araky ny fantatrao, tsy misy karazana daty iray fotsinyHiankina amin'ny karazana palma hatrany izany. Voalaza fa ny kalitaon'ny daty tsara indrindra dia hita ao amin'ny faritry ny Tonizia, manana hoditra malama sy malama ary mainty izy ireo. Etsy ankilany, daty turkish Malaza be koa izy ireo, miloko mainty kokoa ary marefo kokoa. Farany, mahita daty isika, avy amin'ny Elche izay tena tsara kalitao.
1 Ahoana ny fandaniana daty
2 Fananana sy tombony azo amin'ny daty
3 Torohevitra hiatrehana daty
Ahoana ny fandaniana daty
Ao amin'ny nahandro mediterania Ampiasaina be izy ireo, ary azo ampiasaina amin'ny tsindrin-tsakafo, ho sakafo lehibe na karazana lovia.
Raha vao esorina ny taolana dia afaka mameno voankazo maina na paty fromazy isika.
En Gresy sy TorkiaMiara-manamboatra izany amin'ny hena sy trondro izy ireo.
Afaka mahita isika vinaingitra daty, azo atao chutney, amin'ny endrika paty sy masomboly ho an'ny vokatra fanaova-mofo.
Tsy tokony hohadinointsika izany tsiry hazoAvy amin'ny hazo palma isika dia mahazo ny fon'ny palma, izay ampiasaina amin'ny salady.
Fananana sy tombony azo amin'ny daty
Ny daty dia manome antsika sakafo mahavelona be izay ilain'ny vatantsika ho angovo mandritra ny andro. Ny daty dia miavaka amin'ny fanomezana antsika angovo be sy fanatsarana ny toetrantsika.
Manaraka izany dia lazainay aminao hoe inona ireo tombony tena tsara azonay tamin'ny daty.
Ampirisihina hihinana daty ao vanim-potoanan'ny fianarana na rehefa mila angovo be loatra.
Mampitombo ny fahaizan'ny saina sy ny hakingana izy ireo.
Sakafo manankarena izy io asidra amine antioxidant.
Miadia toy izao radika maimaimpoana.
Manome hydrate an'ny karbaona, potasioma, phosforus, calcium y mangezioma.
Misy asidra pantothenic, ilaina hanovana ny tavy ho lasa gliosida sy angovo.
Manampy antsika hanao ilay fanatanjahantena ankafizinay io daty io. Mpiroborobo izy io mba hamoronana hozatra.
Miady amin'ny adin-tsaina, la fanahiana ary manampy antsika hatory.
Sakano tsy hanana fizarana adin-tsaina.
Manankarena fibre izy noho izany, manampy antsika hiady ny fitohanana.
Manampy mampihena kolesterola ao anaty ra. Tsy dia misy tavy akory izy ireo ary manampy amin'ny fifehezana ny haavon'ny.
Manatsara sy mandray anjara amin'ny fandevonan-kanina tsara izy ireo, manamaivana ny fitohanana, misoroka ny gazy ary mandray anjara amin'ny tsy fahazoana lanja be loatra.
Manome siramamy tena ilaina manome hery antsika izany. Ny siramamy voajanahary no glucose, fructose ary sucrose.
Manankarena vy izy ireo, noho izany dia atolotra an'izay rehetra manana izany tsy fahampian-dra, na ny beantitra mila angovo kely fanampiny.
Etsy ankilany, manankarena amin'ny potasioma ary ambany ambany amin'ny sodium, ny daty dia manampy amin'ny fandrindrana ny rafi-pitabatabana.
Torohevitra hiatrehana daty
Manana andro lava ny daty, na dia tsy midika akory izany fa tsy ho ratsy. Tokony ho hainao ny mitahiry sy mitahiry azy ireo tsara mba tsy hiharatsy azy ireo. Noho io antony io, dia ampirisihinay hitahiry azy ireo amin'ny siny fitaratra mahasalama sy maina, amin'ny toerana tsy ahitany hazavana.
Araka ny efa nolazainay, ny daty dia manankarena amin'ny otrikaina sy mineraly marobe, toy ny calcium, phosphore, potassium, magnesium ary vitamina misy ny vondrona B, provitamin A, C ary D.. Aza misalasala mampiditra izany amin'ny sakafonao mba ho afaka mandray soa amin'izy rehetra. Azonao atao ny mihinana daty 3 sy 5 isan'andro eo ho eo.
Mamy ny tsiron'izy ireo mahavoky ary azo lanina amin'ny sakafo mampihena, na izany aza, tsy tokony hampijaly azy ireo isika satria manankarena siramamy, na dia mahasoa dia afaka manova ny fihenantsika lanja.
Araka ny efa hitanao, ny daty dia sakafo matsiro efa lanina nandritra ny an'arivony taona maro, ity voankazo kelin'ny palma ity dia hita amin'ny saika rehetra. fivarotana lehibe, tsena ary fivarotana lehibeNa izany aza, ny kalitaony dia hiova arakaraka ny niaviany.
Mitadiava toetra tsara indrindra ary fantaro hoe avy aiza ireo daty tianao indrindra, azo antoka fa hahita ny tianao ianao ary ahafahanao manamboatra fomba matsiro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » sakafo » Toetran'ny daty
Sakafo voarara amin'ny asidra urika